Hoggaamiye Xaflada Sanadguradii 95,aad Ee Dhalashadiisa Ku Qabsanaya 1,000, 000, xili dalkiisa Baahiweyni Ka Jirto | Araweelo News Network
Hoggaamiye Xaflada Sanadguradii 95,aad Ee Dhalashadiisa Ku Qabsanaya 1,000, 000, xili dalkiisa Baahiweyni Ka Jirto
Herari(ANN)Hoggaamiyaha madaxa adag ee caanka ku ah dhalleecaynta siyaasada reer galbeedka Madaxweyne Mugabe, ayaa xusay sanad guuradii dhalashadiisa, isagoo ah 95 jir.
Madaxweyne Rober Mugabe, ayaa xukunka iyo awoodda dalkaasi hayay tan iyo sanadkii 1980-kii, xilligaasi oo Zimbabwe ay soo afjartay xukunkii caddaanka laga tirada badnaa boqolaal sanadood ku haysteen dalkaa, waxayna si buuxda xornimada uga qaadatay Britain.
Boqolaal kun oo qof ayaa ka qeyb galaya munaasabada lagu xusayo sannadguurada 95-aad ee ka soo wareegatay markii uu dhashay madaxweynaha Zimbabwe, Rober Mugabe.
Munaasibada, ayaa lagu qiyaasay kharashka ku baxaya inuu gaadhayo, $ 1,000,000 oo doolar, waxayna arrintan kusoo beegantay xili dalka Zimbabwe ay ka jiraan Abaaro ba’an, iyadoo dadka siyaasada Mugabe dhaliila arrintaa ku tilmaameen inay ka habboonayd maadaama waddankaasi uu haatan wajahayo abaar in dhaqaalaha intaa leeg baahiyaha dadka beeralayda haysta wax lagaga qabto.
Madawrynaha Zimbabwe Mr. Mugabe, wuxuu caan ku yahay dhaliilaha siyaasada hoggaamiyayaasha wadamada reer galbeedka, wuxuna ka mid ahaa hoggaamiyayaashii ku caanbaxay halgankii gobonimadoonka afrika, isagoo ka mid ah kuwa tirada yar ee ka nool, waxaana si weyn u ixtiraama dadyowga South afrika, dadka reer Zimbabwe iyo shucuubta kale ee Afrika, kuwaas oo ku taageera halgankii uu usoo galay xoraynta dadka Koonfur Afrika oo uu door weyn ku lahaa iyo halgankii uu ku xoreeyay dalkiisa Zimbabwe.